June | 2019 | Radio Himilo
Jabaan oo dib u bilaabaysa ugaarsiga Nibiriga
Mahad Mohamed June 30, 2019
Himilo – Maraakiibta ugaarsata nibiriga ee dalka Jabaan ayaa isku diyaarinaysa inay ka shaqo bilaabaan dakad ku taalla waqooyiga dalkaasi kaddib muddo 30 sanno ah. Jabaan ayaa shaacisay sannadkii hore inay dib u bilaabayso dabashada nibiriga sababo la xiriira arrimo ...
Barcelona oo €112m ku dooneysa Lautaro Martinez
Himilo – Barcelona ayaa isku diyaarineysa inay € 112m kula soo wareegto weeraryahanka Inter Milan Lautaro Martinez, sida ay sheegayaan wargeysyada Argentina, ka dib markii Copa America uu bandhig ka sameeyay. Weeraryahanka ayaa 22 jirsan doono bisha August, waxaa loo ...
Ganacsiga timo beerista Turkiga oo sameeyay dhaqaale badan
Himilo – Qiimaha suuqa tima beerista dalka Turkiga ayaa kor u dhaafay 1 Bilyan oo doolar sannadkii hore sida laga soo xigtay sarkaal katirsan waaxda xiriirka dhaqaalaha dibadda ee dalkaasi. Xogtan ayaa ku soo aadaysa xilli Turkiga uu kamid noqday ...
Real oo usoo bandhigtay Liverpool mid ka mida xiddigaheeda
Himilo – Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay tijaabin doonto Liverpool marka ay timaado Sadio Mane iyadoo Reds fursad u siineyso inay lasoo saxiixato Marco Asensio xagaaga. Mane ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareedkii 2018-19 ee kooxda Jurgen Klopp, isagoo ...
Gabar wadnaheeda uu istaagsanaa muddo 6 maalin ah oo la badbaadiyay!
Himilo – Xaalad caafimaad tii ugu horreysay oo mar la arag ah ayaa lagu tilmaamay markii ay badbaaday gabar 10 jir ah oo wadnaheeda uusan shaqeyn muddo lix maalin ah magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha. Sida laga soo xigtay mareegta ...
Mbappe oo aan doonaynin inuu qandaraas cusub u saxiixo PSG
Mahad Mohamed June 29, 2019
Himilo –Kylian Mbappe ayaan wax muhiimad ah ka lahayn inuu qandaraas cusub u saxiixo PSG, waxaana laga yaabaa inuu qaato mushaar dhimis si uu ugu biiro Real Madrid. Kylian Mbappe ayaa lagu soo waramayaa inuu u caddeeyay Paris Saint-Germain in ...
Solskjaer oo u sheegay United inay beddalka Pogba kala soo saxiixdaan Barcelona
Himilo –Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya in Manchester United ay lasoo saxiixato Ivan Rakitic si uu u beddalo Paul Pogba, sida laga soo xigtay wargeysyada Spain. Pogba ayaa cadeeyay inuu doonayo inuu ka tago Old Trafford xagaagan, halka Real Madrid ...
Daraasad: Cagacageynta oo leh faa’iidooyin caafimaad
Himilo –Baaritaan cusub ayaa daaha ka qaaday in socodka kabo la’aanta uu ilaalo u yahay cagaha qofka inka badan inta kabaha ka badbaadinayaan. Sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay majalada The Nature, cirbo jeexa ka dhasha socodka badan ee kabo ...
Seynisyahano xaqiijiyay aragti laga qabay caanaha
Himilo –Tan iyo muddo dheer, waxaa jirtay aragti laga aaminsanaa cabbista caanaha marka uu qofka qaato cunno kulul iyadoo u muuqata immika in la helay caddeynta arrintaasi. Baarayaal katirsan jaamacadda Pennsylvania ayaa oggaaday in caanaha yihiin xalka ugu habboon ee ...